xirfadaha kombiyuutarka aasaasiga ah | USAHello | USAHello
In dunida maanta, waxaan oo dhan waxay u baahan yihiin in la isticmaalo kombiyuutarada iyo technology kale. Computers kaa caawin kara inaad shaqo ku heli lahayd iyo in ay ku xirmaan asxaabta iyo qoyska. Boggan waxaa ka mid ah ilaha qaar ka mid ah si loo helo xirfadaha kombiyuutarka aasaasiga ah.
Waxaa aad muhiim u ah in la ogaado sida loo isticmaalo kombiyuutar. Shirkadaha badankood waxay rabtaa in aad codsatid shaqo online. Waxaad la hadli kartaa qoyskaaga iyo saaxiibadaa marayo email, chat, iyo video. Waxa kale oo aad ka heli kartaa nooc kasta oo macluumaadka aad rabto in aad. Waxaa jira meelo badan oo internetka oo aad ka baran karaan xirfadaha kombiyuutarka aasaasiga ah oo lacag la'aan ah.
Kuwanu waa labada ugu fiican, free, websites xirfadaha kombiyuutarka, waxaannu aragnay online.
Digital Baro leeyahay fasalada dhowr inuu kaa caawiyo inaad bartaan aasaaska computer iyo xirfadaha internet. Waxaad baran karo oo ku saabsan qaybaha kala duwan ee computer ah iyo nidaamyada hawlgalka. Nidaamka Operating jira barnaamijyo kaa caawin baxsad computer aad. Waxaa jira koorsooyin ku saabsan sida loo isticmaalo email.
In ammaan internetka waa muhiim. Haddii aadan si taxaddar leh, macluumaadkaaga shakhsiyeed aad xadi karo internetka. Qof isticmalaan si ay u iibsadaan aad lacag. Waxaad qaadan kartaa fasalada ay bartaan sida loo sii macluumaadkaaga gaarka loo leeyahay iyo ka fogaadaan fiisa. fasallo kale idin bari doonaa si ay ula xiriiraan dadka iyo sida loo online dukaameystaan.
Digital Baro casharada waa sahlan oo ay raacaan. Tusaale ahaan, Waad awoodaa lkasban sida in amaan internetka. Ama waxaad ku baran kartaa sida loo abuuro iyo badbaadin dukumentiyada ee Microsoft Word.
GCFLearnfree leeyahay koorsooyin badan oo online iyo videos si uu kaaga caawiyo inaad barato kombiyuutarada. Waxaad baran kartaa sida loo qotomiyey your computer iyo waxa qaybaha kala duwan yihiin. fasalada ka hadli ku saabsan sida loo badbaadin dukumentiyada iyo meesha ay u tagaan marka aad samayn. fasalo kale ee ku saabsan sida loo isticmaalo internetka iyo is ogow fiican ee aad computer waa. Oo iyana waxay sidoo kale leeyihiin fasalada ammaanka internet.
Daawo video GCFLearnfree.org in sharxayaa qaybaha kala duwan ee computer ah
Daawo video kale oo ku saabsan sida loo isticmaalo Gmail
Bar carruurtaada oo ku saabsan ammaanka internet
Waxaa aad muhiim u ah ilmahaaga in la ogaado oo ku saabsan ammaanka internet. Waxaa ku caawin doonta fahamka khataraha la hadalka dadka iyagu ma ay yaqaaniin internetka. carruurtaada oo ku saabsan ammaanka internet bar la NetSmartz.org.
Ma jeclaan lahayd inaad si fasal tago? Haddii aad haysato waqti adag barashada on adiga kuu gaar ah, waxaa wanaagsan in aad macallin ka noqon kartaa! maktabadaha dadweynaha badankood waxay leeyihiin fasalo kombiyuutar free waxaad tagi kartaa. Raadi maktabadda kuugu dhow ama search FindHello si aad u hesho duruus kombiyuutar ee dadka waaweyn kuu dhow.
Raadi barnaamijyo tababar shaqo